6 Yakanakisa Maitiro Aizowedzera Wako Vatengi Ongororo kutora Chikamu | Martech Zone
6 Yakanakisa Maitiro Aizowedzera Wako Vatengi Ongororo kutora Chikamu
Mugovera, Nyamavhuvhu 27, 2016 Mugovera, Nyamavhuvhu 27, 2016 Mike Jones
Kuongorora kwevatengi kunogona kukupa zano rekuti vatengi vako ndivanaani. Izvi zvinogona kukubatsira kuti uchinje, uye gadzirisa yako chiratidzo chechiratidzo, uye zvakare zvinogona kukubatsira iwe mukuita fungidziro nezve ravo ramangwana zvavanoda uye zvavanoda. Kuitisa tsvagiridzo kakawanda sezvaunogona inzira yakanaka yekugara kumberi kwekakona kana zvasvika kune zvinoitika uye zvaunofarira vatengi vako.
Ongororo dzinogona zvakare kukurudzira kuvimba kwevatengi vako, uye pakupedzisira, kuvimbika, nekuti zvinoratidza kuti unofarira zvechokwadi maonero avo, uye uri kuisa mukuedza kuvagutsa. Ita shuwa kuti iwe unozivisa vatengi vako nezve shanduko dzawakaita, zvichibva pamhinduro yavo. Zvikasadaro, kuedza kwako kune njodzi yekusaonekwa. Vanhu vanowanzo rangarira zvakashata zviitiko zvirinani pane zvakanaka, saka kuvandudza kunogona kuenda kusingaonekwe, nekuda kwekuti vatengi vako vanogona kunge vakagarika. Saizvozvo, zvinogona kudzosa vamwe vevatengi wawakarasa, dai vaimbove vasina kugutsikana nebhizinesi rako.
Mhedzisiro yakanaka pamusoro peongororo yevatengi inogona zvakare kuwanda sekuongororwa kwekambani. Ichokwadi iri nani nzira kune kutsikisa yakabhadharwa kana kukumbira wongororo. Ita shuwa kuti iwe unobvunza vatengi vako kuti vabvumirwe, usati wafunga kuita kuti mhinduro dzavo dzive pachena, kunyangwe kana ongororo yacho isingazivikanwe.
Kune sainzi yakazara ku kugadzira mibvunzo yakanaka, izvo zvinodzivirira mhinduro dzakarerekera divi, uye kukwanisa kunyengedza mhinduro yakatendeseka yevanhu vari kutora chikamu muongororo. Nehurombo, kune zvakawanda zvinhu izvo zviri kuzokanganisa mhinduro dzevatengi vako, uye mazhinji acho ari pamusoro pesimba rako. Zvichienderana neruzivo rwauri kutsvaga kuwana, ungangoda kuvabvunza kuti vape mhinduro nekukurumidza mushure mechiitiko chaunoda kuongorora. Mhinduro dzinosungirwa kuve dzakanyanya kushushikana sezvo vatori vechikamu vari kuzoyeuka zvakanyanya zvakajeka ruzivo rwavo. Nekudaro ivo vachiri pasi pesimba remanzwiro avakabatana nawo.
Kana iwe uchitsvaga rumwe ruzivo ruzivo, saka zvakanak kupa vatengi vako imwe nguva, usati wavasarudzira. Izvi zvinovapa mukana wekuongorora mamiriro acho nekujekesa zvakanyanya. Mhinduro dzavanopa hadzizombove dzechokwadi, asi izvi handizvo zvaunofarira neimwe nzira. Vatengi vako vanofanirwa kugutsikana, kutanga uye zvakanyanya, uye kugutsikana hakusi chinangwa.
Kana iwe uchida kuwana zvakanyatso kubva pane yako ongororo, usaite mibvunzo yemibvunzo inomhanyisa pamapeji, uye mapeji. Vatengi vako vanogona kubhowekana, uye wotanga kupindura vasina kunyatso kufunga mibvunzo, kuti zviitwe. Sezvineiwo, yako ongororo haifanire kunge iine inopfuura makumi matatu mibvunzo yepamusoro. Uye inofanira kutora maminetsi mashanu kuti apedze.
Kana iwe uine inopfuura makumi matatu mibvunzo yekubvunza, kana kana fomati yemibvunzo yacho inotora anopfuura maminitsi mashanu kuti upindure, funga kupaza runyorwa rwemibvunzo kuita ongororo dzakawanda. Varongedzere zvinoenderana nemusoro wenyaya yavo, kuti uzive zvauri kutsvaga.
Customer Survey Kakawanda
Maitiro uye zvaunofarira zvinoshanduka pamwero unoshamisa kwazvo, saka unofanirwa kuita ongororo kakawanda sezvaunogona. Izvi zvinopa mukana wekutarisazve kugona kwemibvunzo yako, uye kuwedzera mumibvunzo yakasiiwa yapfuura.
Iwe ungangoda kuve nehupamhi hweongororo iyo inogara ichiwanika pane yako kambani yekambani, kuti uongorore vatengi vako 'huwandu hwehuwandu hwekugutsikana nezvako zvigadzirwa kana masevhisi Asi kana iwe uchitsvaga imwe yakatarwa mhinduro, yakanangwa pane imwe yakatarwa chidzidzo, pane zvaunofanirwa kushambadzira iyo ongororo zvakasiyana.
Mutengi Ongororo Mibvunzo Mibvunzo
Mibvunzo isina kujeka kana isina kujeka inomhanyisa njodzi yekutsvaga mhinduro dzeongororo yako. Nguva yemubatsiri inofanirwa kushandiswa kutarisisa pamhinduro, kwete zvinorehwa nemibvunzo. Mumamiriro ezvinhu mune iyo mibvunzo isinganzwisisike, anotora chikamu anogona kunge achingoda kusarudza mhinduro. Uye izvi zvinogona kuburitsa nzira inotsausa.
Kupfuura izvo, vatengi vako vanogona kungoregedza pane zvakasara zveongororo zvakare, kana vakawana iyo mibvunzo isinganzwisisike. Ivo vanofanirwa kunzwa sekunge vari kushandisa nguva diki kwazvo kupedzisa iro remibvunzo, saka ivo vanozonzwa vachida kutarisisa mhinduro imwe neimwe nokungwarira.
Mutengi Wemubvunzo Mubvunzo Optimization
Pane zvinhu zvakawanda zviri kuzochinja nzira iyo vatengi vako vanopindura nayo ongororo dzako. Dzimwe dzinogona kuve dzakangwara senzira iyo iwe yaunotaura nayo mumwe mubvunzo, kana iwe kana kwete kushandisa mazwi ivo vanogona kunge vane yakaipa mufananidzo inosangana navo uye kunyangwe marongero aunobvunza iwo mibvunzo.
Kuti uwane mhedzisiro, mhedzisiro inodzidzisa, iwe uchazoda kuve nemusiyano wakawanda munzira iyo iwe yaunogadzira yako yemibvunzo. Iwe unogona kubvunza iwo iwo mubvunzo mumwe nenzira dzakawanda, kudzivirira kusasarura kunoenderana nemazwi uye kupamhidzira, uye iwe unofanirwa zvakare kufunga nezve kusanganisa iyo pateni yaunobvunza mibvunzo yako.
Kune mibvunzo ine akawanda sarudzo mhinduro, funga kuendesa sarudzo dzakatenderedza. Nenzira iyoyo, iwe unozodzivirira kuseta mhando yechiitiko kune vatengi vako, uye uchavamanikidza kuti vafunge nezvemubvunzo wega wega.
Customer Ongororo Mibayiro
Kana iwe ukaona kuti vatengi vako vachizeza kutora ongororo dzako, funga kuvapa zvishoma kurapwa kana wapedza. Makambani mazhinji anoshandisa zano iri kukurudzira vatengi vavo kuti vapindure.
Nekudaro, iwe unogona kumhanyisa njodzi yekuti vanhu vatore ongororo kuitira mubayiro chete, pasina kunyatso kuve nekudyidzana nekambani yako. Ita shuwa iwe unowedzera imwe nzira yekusimbisa, kuona kana ivo vachiziva zvavari kutaura nezvazvo pakupindura mibvunzo yako. Dzimwe ongororo dzinoda kuti iwe uzadze ruzivo iyo yakadhindwa parisiti. Iwe unogona kuwedzera pop-ups kune webhusaiti yako, iyo yakatarwa kuenda kubva mushure mekunge chimwe chiitiko chaitwa, sekutarisa kunze kwechitoro chepamhepo, kana mushure mekubatanidzwa kwakatarwa.
Kurudzira Zvakadzama Mhinduro
Mune chero ongororo, zvisinei neruzivo rwauri kutsvaga, ndezvekukosha zvakanyanya kuti iwe unopa vatengi vako mukana wekutaura. Tsanangudzo dzakadzama dzinogona kuve chinhu chakakosha zvakanyanya kupfuura mibvunzo inopa sarudzo pakati pemhinduro dzinoverengeka.
Iyo poindi yeongororo ndeyekutsvaga zvinhu zvausingazive nezve ako vatengi. Iyo mibvunzo nemhinduro zvakagadzirwa newe zvinonyanya kushandiswa kana iwe uchifarira kutsvaga zvakanyatsojeka zvinhu, izvo zvisingatenderi kune yakawanda nuances.
Makomendi anogona kukupa iwe nzwisiso iwe yaungadai usina kumbofungidzira neimwe nzira. Nehurombo, zvakanyanya kuomarara kuti vatori vechikamu vashandise nguva vachinyora pasi mhinduro dzakareba kupfuura zvazviri kuvapa iwo mukana wekutepa bhokisi. Saka, kunyangwe iwe uchitsvaga mhinduro dzakadzama, chengeta kumibvunzo yakapusa, saka havanzwe sekuti vari kushandisa yakawandisa pamhinduro.
Ongororo inogona kuva chishandiso chakakosha kana zvasvika pakuongorora huwandu hwegutsikano hwevatengi, uye kufanotaura mafambiro emangwana. Izvo zvinowedzerawo kuvimba kwemutengi wako uye zvinoratidza kwavari kuti unonyatsovafarira, uye zvavanofarira uye zvekuisa.
Tags: kureba kwevatengimutengi ongororo yekupamutengi ongororo optimizationmutengi ongororo mibvunzomutengi ongororo mibairovatengi ongororotsvakurudzo
Mike Jones akapedza kudzidza kuYunivhesiti yeBoston, aine MS muMass Communication. Iye zvino ave wenguva yakazara munyori, ane shungu nezve zvese zvine chekuita nebhizinesi uye tekinoroji.
Digimind: Yemagariro Media Ongororo yeiyo Bhizinesi